Izingane ziyehluleka ukuthathela lesi sifo ekhanda | Scrolla Izindaba
Izingane ziyehluleka ukuthathela lesi sifo ekhanda
Izindaba ezimnandi ukuthi bonke abafundi abangama-204 abathole i-Covid-19 eMakaula Senior Secondary, isikole okuqubuke kakhulu igciwane eNingizimu Afrika basindile.
Izindaba ezimbi ezokuthi kunzima ukukholisa izingane kanye nabazali ngesidingo sokuthathela igciwane ekhanda.
Le vidiyo ijikeleza emaqenjini ezinkundla zokuxhuma zabazali baseMakaula.
Uma izingane ezithelelekile kwengenzeka zelulame, zingadlulisa ukuqeqesha ngalesi sifo esibulalayo kubantu abadala.
Kanti kuseduze ukwazi ukuthi ingabe kukhona yini okungaqhamuka ngemuva uma izingane zidla umshwanguzo.
Izingane njalo ziyelulama kwi-Covid-19, kunesibalo esincane sokuthelelana kwezingane eMelika ngezingane ezishona ngokuvuvukala imithambo yegazi okungahle kuxhunywe kuleli gciwane. Kunezingane ezinthathu ezishone ngenxa ye-Covid-19 eMelika maduzane nje.
Iyona nqikithi yenkinga nge-covid-19: lesi sifo siyingozi kwimbijana yabantu, kodwa singakhona ukudluliseka yiwowonke umuntu.
Kuleli viki kuke kwaba nokugxuma kosuku okukhulu okungakaze kube khona ezweni, manje abantu abathelelekile bayizi- 8 728 kanti eGoli likhuphuka ngokushesha ngoba izibhedlela zakhona zigcwele kakhulu. Lolu bhubhane le-Covid-19 lilindeleke ukubakhona kuze kwedlule ubusika.